DataNumen: Iwu kuki
Mbido > kuki Policy
Kuki bụ obere ederede nke weebụsaịtị na-ezigara na ihe nchọgharị ahụ ma debe ya na njedebe onye ọrụ, nke nwere ike ịbụ kọmputa nkeonwe, ekwentị mkpanaaka, mbadamba, wdg. Faịlụ ndị a na-enye ohere ka ebe nrụọrụ weebụ ahụ cheta ozi banyere nleta gị, dị ka asụsụ na nhọrọ kachasị mma, nke nwere ike ime ka nleta gị ọzọ dị mfe ma mee ka saịtị ahụ baara gị uru. Kuki na-arụ ọrụ dị oke mkpa iji melite ahụmịhe onye ọrụ na weebụ.
Kedu ka esi eji kuki?
Site na ịgagharị na ebe nrụọrụ weebụ a ị na-anabata na anyị nwere ike iwunye kuki na akụrụngwa gị ma mee ka anyị mara ozi ndị a:
Ihe omuma banyere ihe eji eji web.
Preferreddị ahọrọ nke ịnweta weebụ site na ngwaọrụ mkpanaka.
Nchọgharị kacha ọhụrụ na ọrụ ntanetị na ọrụ ịhazi data.
Ozi gbasara mgbasa ozi egosiri ndị ọrụ.
Njikọ data na netwọkụ mmekọrịta maka ndị ọrụ, ịnweta Facebook ma ọ bụ Twitter gị.
Cookiesdị kuki eji
Weebụsaịtị a na-eji temporary kuki nnọkọ na kuki na-adịgide adịgide. Kuki nke oge na-echekwa ozi naanị mgbe onye ọrụ na-enweta Weebụ na kuki na-adịgide adịgide echekwara na data njedebe ka ịnweta ma jiri ya karịa otu oge.
Nka na ụzụ kuki: ndị a na-enye onye ọrụ ohere ịnyagharịa na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa ma jiri nhọrọ ma ọ bụ ọrụ dị iche iche ebe ahụ. Dịka ọmụmaatụ, iji njikwa okporo ụzọ na nkwukọrịta data, iji mata nnọkọ, ịnweta akụkụ Websaịtị amachibidoro, wdg.
Nhazi nke kuki: ndị a na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta ọrụ ahụ na ụfọdụ atụmatụ izugbe akọwapụtara na ọnụ gị, ma ọ bụ ntọala akọwapụtara onye ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, asụsụ, ụdị ihe nchọgharị ị na-esi enweta ọrụ ahụ, atụmatụ nke ọdịnaya ahọpụtara.
Kuki nyocha nyocha: ndị a na-enye ohere nlekota na nyocha nke omume onye ọrụ na weebụsaịtị. A na-eji ozi anakọtara site na kuki ndị a atụ ọrụ nke weebụsaịtị, ngwa ma ọ bụ saịtị ikpo okwu na profaịlụ nke igodo ndị ọrụ nke saịtị ndị a, iji meziwanye ọrụ na arụmọrụ nke ndị ọrụ.
Kuki nke atọ: Na ibe weebụ ị nwere ike iwunye kuki ndị ọzọ na-enye gị ohere ijikwa ma melite ọrụ ndị enyere. Dịka ọmụmaatụ, ọrụ nchịkọta akụkọ nke Google Analytics.
Nwere ike igbochi kuki site na ị rụọ ọrụ ntọala na ihe nchọgharị gị na-enye gị ohere ịjụ ntọala nke kuki niile ma ọ bụ ụfọdụ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na iji ntọala nchọgharị gị iji gbochie kuki niile (gụnyere kuki ndị dị mkpa) ị gaghị enwe ike ịnweta ma ọ bụ akụkụ nke saịtị anyị ma ọ bụ weebụsaịtị ọ bụla ị gara.
Ewezuga kuki ndị dị mkpa, kuki niile ga-agwụ mgbe oge ụfọdụ gachara.